Tsarovy Ireo any Am-ponja—Vavolombelon’i Jehovah
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Chitumbuka Danoà Espaniola Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Haoussa Holandey Hongroà Ibo Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tiorka Tseky Tsonga Xhosa Zoloa Éwé
Milaza ny Fifanarahana Iraisam-pirenena Momba ny Zo Sivily sy Politika fa manan-jo “hanana ny heviny sy ny feon’ny fieritreretany ary ny fivavahany” ny olona. * Gadraina sy ampijalina amin-kabibiana anefa ny Vavolombelon’i Jehovah any amin’ny tany sasany, rehefa mampiasa an’io zo fototra ananan’ny olona io. Tovolahy tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany ny ankamaroan’izy ireo. Ny sasany kosa gadraina satria mampihatra ny zavatra inoany.
Mbola mifikitra amin’ny zavatra inoany foana ny Vavolombelon’i Jehovah na dia ampijalina toy izany aza. Lasa ratsy laza kosa ny fitondram-panjakana mampijaly azy ireo satria tsy manaja ny zon’olombelona. Asehon’ny tabilao eto ambany hoe aiza avy no misy Vavolombelon’i Jehovah gadrain’ny fitondrana, ary firy ny isan’izy ireo.
Lisitr’ireo nogadraina nanomboka tamin’ny 12 Novambra 2013
Araka ny tatitra farany dia Vavolombelon’i Jehovah 52, lehilahy sy vehivavy, no migadra sady mijaly be. Tsy nisy fiampangana mazava natao azy ireo. Tsy nisy nandalo fitsarana koa izy ireo, fa tonga dia nogadraina noho izy ireo nanao asa ara-pivavahana, na tsy nety nanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany, na noho ny antony tsy fantatra. Nanomboka tamin’ny 24 Septambra 1994, izany hoe efa ho 20 taona, i Paulos Eyassu sy Isaac Mogos ary Negede Teklemariam no nigadra satria tsy nety nanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Maty tany am-ponja i Misghina Gebretinsae sy Yohannes Haile, izay samy 60 taona mahery. Nampiditra am-ponja sy nampijaly ary nanenjika ny Vavolombelon’i Jehovah foana i Érythrée, hatramin’ny nahazoany fahaleovan-tena tamin’ny 1993.
Tovolahy Vavolombelon’i Jehovah 599 izao no migadra herintaona sy tapany avy, noho izy ireo tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Nanomboka tamin’ny Adin’i Korea ka hatramin’izao, dia nanameloka foana an’ireo tovolahy Vavolombelon’i Jehovah tsy mety manao miaramila i Korea Atsimo, sady tsy manisy fanompoana sivily ho solon’ny raharaha miaramila. Vavolombelon’i Jehovah 17 549 no efa voaheloka higadra 34 100 taona raha atambatra, satria tsy nety nanao miaramila. Tsy manatanteraka ny zavatra takin’ny fifanarahana iraisam-pirenena nataony i Korea Atsimo, ary mandà ny zon’ny olona tsy hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Raha mila fanazavana fanampiny, dia jereo ilay hoe Mampitaraina Firenena Maro ny Tsy Rariny Ataon’i Korea Atsimo.
Tsy nety nanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany ny tovolahy Vavolombelon’i Jehovah iray 20 taona ka nogadraina. Tsy misy fanompoana sivily solon’ny raharaha miaramila mantsy any Nagorno-Karabakh. Voaheloka higadra roa taona sy tapany izy tamin’ny 30 Desambra 2011. Nangataka mba hafahana izy ny 29 Janoary 2013 nefa nolavina izany. Nisy fangatahana natao koa mba hanafahana azy noho izy tsy salama, nefa tsy neken’ny mpiandraikitra ny fonja izany.
Manery ny olona hanao miaramila ny fitondrana any Singapour, sady mandà ny zon’ny olona tsy hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Tapa-kevitra ny hanaraka ny feon’ny fieritreretany voaofan’ny Baiboly anefa ny tovolahy 18 miara-mivavaka amin’ny Vavolombelon’i Jehovah, ka nogadraina. Raha atambatra dia telo taona sy telo volana no nigadran’izy ireo tany amin’ny toby fitanan’ny miaramila. Nisy Vavolombelona iray koa nafahana tamin’ny Aogositra 2013, rehefa avy nigadra herintaona noho izy tsy nety nanao miaramila fiandry.
Vavolombelon’i Jehovah sivy mirahalahy izao no migadra any: Tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany ny valo, ary ny iray kosa voaendrikendrika. Herintaona ka hatramin’ny roa taona eo ho eo izao no nigadran’izy ireo, ary matetika izy ireo no nokapohin’ny mpiambina ny fonja sy ny miaramila. Nampangaina ho “mpamerin-keloka” indray anefa ny sasany amin’izy ireo, rehefa nafahana, ka nalefa tany amin’ny fonja hentitra kokoa.
^ feh. 2 Jereo koa ny Andininy faha-18 amin’ny Fanambarana Iraisam-pirenena Momba ny Zon’olombelona nataon’ny Firenena Mikambana, sy ny Andininy faha-9 amin’ny Fifanarahana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona.